Imfazwe yaseJutland kwiMfazwe Yehlabathi I
Imfazwe yaseJutland - Imfazwe kunye nexesha
Imfazwe yaseJutland yahlaselwa ngoMeyi-31 Juni ngo-1, 1916, kwaye yayiyinto enkulu yezemfazwe yeMfazwe Yehlabathi I (1914-1918).
I-Admiral Sir John Jellicoe
I-Vice Admiral uSir David Beatty
Iinqwelo zokulwa ezingama-28, i-9 battlecruisers, ama-cruise angama-9, abahamba ngeendlela ezingama-26, ababhubhisayo abangama-78, i-minelayer, 1
I-Vice Admiral Reinhard Scheer
I-Vice Admiral Franz Hipper
Iinqwelo zokulwa ezili-16, ama-battlecruisers ama-5, ama-6 ngaphambili, ama-11 ahamba ngokukhanya, i-61 torpedo boats
Imfazwe yaseJutland - Injongo yeJamani:
Ngokubambisana kwababambene kunye nokuthatha inzame kwimigudu yemfazwe yaseJamani, uKaiserliche Marine waqala ukuceba izicwangciso zokuzisa iRoyal Navy ukulwa. Ekubhaliweyo kwiimfazwe kunye nabadlali beempi, umlawuli we-High Seas Fleet, i-Vice Admiral Reinhard Scheer, uthembele ukukhwela inxalenye yeenqwelo zaseBrithani ekugqibeleni kwayo ngenjongo yokuhlwa kwamanani okubandakanyeka okukhulu emva komhla. Ukufezekisa oku, i-Scheer ejolise ekubeni ne-Vice Admiral Franz Hipper yamandla okuhlola ama-battlecruisers ahlasela inxweme yesiNgesi ukuze athathe i-Vice Admiral Battlecruiser Fleet uSir David Beatty.
Umlindi wayeza kushiya umhlalaphantsi, ekhokelela ekuqhubekeni kweBetyty kwi-High Seas Fleet eya kutshabalalisa iinqanawa zaseBrithani. Ukuxhasa inkxaso, iinqwelo zasemanzini ziya kuthunyiswa ukuba zenze buthathaka amandla kaBatty ngeli xesha lijongene ne-Grandmleal Sir-Jellicoe ye-Grand Fleet kwi-Scapa Flow.
Engaziwa kwiSystem, abakwaBrithani abakhowudi beCode kwi-Room 40 bephule iikhowudi zamanxweme zaseJamani kwaye baqonda ukuba umsebenzi omkhulu wawusekuhlaleni. Ukungazi ngeenjongo zeCyer, iJellicoe ikhutshwe ngeenqwelo zokulwa ezi-24 kunye namabutho amathathu e-battlecruisers ngoMeyi 30, ngo-1916, kwaye yathatha indawo yokuvala indawo engamaphekula angama-90 ukuya entshona kweYutland.
Imfazwe yaseJutland - I-Fleets iya kuLwandle:
Ukuhamba kukaJellicoe kwalandelwa kamva ngaloo Mgcini owashiya i-Jade Estuary kunye namahlanu e-battlecruisers. Ukwazi ukuhamba ngokukhawuleza kunomphakamileyo wakhe, uBethty wanyuka esuka kwi-Firth yasekuqaleni kweMeyi 31 kunye nemibhozo emithandathu yeemfazwe kunye neenqwelo zokulwa ezine ezizimeleyo zeFifth Battle Squadron. Ukushiya emva koMgcini, iSeker yahamba olwandle ngoMeyi 31 ngeenqwelo zokulwa ezilishumi elinesibhozo kunye neyesithupha zokuqala. Kuzo zonke iimeko, ukubunjwa ngalunye kwakuhamba kunye nabaphathi bemikhosi kunye nabanqabileyo, ababhubhisi, kunye nezikebhe ze-torpedo. Njengoko iBrithani iqhubekile, i-German-boat-screen screen yangqina kwaye ayizange idlale indima.
Imfazwe yaseJutland - I-Battlecruisers Iqokelela:
Njengoko iinqwelo ezifudukela kumnye nomnye, impazamo yezonxibelelwano iholele uJellicoe ukuba akholelwe ukuba iSiker iseselunxwemeni. Ngethuba ebenesimo sakhe, uBethty wanyuka esempuma waza wafumana ingxelo evela kubafundi bakhe ngo-2: 20 PM yeenqanawa zintsha-ntshona. Imizuzu eyisibhozo kamva, iibhola zokuqala zemfazwe zenzeke njengabantu abahamba ngesixhobo saseBrithani bahlangene nabaphangi baseJamani. Ukujika kumsebenzi, uphawu lukaBetty kwi-Admiral Rearal, uSir Hugh Evan-Thomas, waphoswa kwaye i-gap-mile ye-mile yavuleka phakathi kwee-battlecruisers kunye neFifth Battle Squadron ngaphambi kokuba iinqwelo zokulwa zilungiswe.
Esi sithuba sathintela uB Beatty ukuba angenakuchoxiswa ekusebenziseni umlilo xa kuthethwa. Ngo-3: 22 PM, i-Hipper, ehamba ngasentla ngasentshona-ntshona, ibone iinqanawa eziseBetty ezaza. Ukujika kumzantsi-mpuma ukuhamba neBrithani ukuya kwiinqwelo ze-Scheer, i-Hipper yabonwa emva kwemizuzu ezisibhozo. Ukuqhuma phambili, uBeatty wachitha inzuzo kwinqanaba kwaye akazange akwazi ukwenza iinqanawa zakhe ngokukhawuleza. Ngo-3: 48 PM, kunye neefadrononi zombini ngeendlela ezifanayo, i-Hipper yavula umlilo. Kwi-"Ukugijimela eMzantsi," abadlali be-Hipper baqhelaniswe ngcono.
Ngenxa yesiphosiso esisinye seBritani, i- Derclinger i- battlecruiser ishiywe ingabonakali kwaye ikhutshwe ngokungenakuhlulwa. Nge-4: 00, i-Beatty's flagship i-HMS Lion ithatha isifo esichengileyo, ngelixa kwemizuzu emibini kamva i-HMS Indefatigable yaqhuma yaza yazama. Ilahleko layo lalandelwa emva kwemizuzu engamashumi amabini emva kokuba i- HMS uMariya uMariya ihlangabezane nesimo esifanayo.
Nangona ukugoba kuhlasela kwiinqanawa zaseJamani, abadlali beBetty bahluleka ukuphawula nayiphi na into yokubulala. Ukwaziswa kwindlela yokulwa kwee-Scheer kungekudala emva kwe-4: 30 PM, uBetty waphenduka ngokukhawuleza kwaye waqalisa ukuya kumntla-ntshona.
Imfazwe yaseJutland - Iya kuNyakatho:
Ukugqithisa iimfazwe ze-Evan-Thomas, uBetty waphinde wabonisa ubunzima obubangela ukuba i-Fifth Battle Squadron iphendule. Njengoko ama-battlecruisers ahlaselweyo aphuma, iinqwelo zokulwa zazilwela isenzo sokulinda emva kwe-High Seas Fleet. Ukunyuka ku-Beatty, uJellicoe uthumele phambili kwi-Third Battlecruiser Squadron emva kwe-Admiral Horace Hood ngenkathi uzama ukufumana ulwazi malunga nesimo sika-Scheer kunye nesihloko. Njengoko uBethty egijima enyakatho, iinqanawa zakhe zazingena kwi-Hipper, zamgxotha ukuba ziphendukele ezantsi kwaye zijoyine iSuer. Malunga no-6: 00, uBeatty wajoyina uJellicoe njengoko umlawuli waxoxisana ngokuthi iyiphi indlela yokuhambisa le nqanawa.
Imfazwe yaseJutland - I-Dreadnoughts iyahlukana:
Ukuhambela kwimpuma yeSeker, Jellicoe ibeka i-flotti kwindawo yokuwela i-Scheer's T kwaye ibonakala ngokugqithiseleyo njengoko ilanga liqala ukusetha. Njengoko i-Grand Fleet idlulela kumgca wokulwa, kwakukho umsebenzi ogqithiseleyo njengoko iinqanawa ezincinci ziqhubela phambili, zifumana indawo leyo igama elithi "Windy Corner." NgeJellicoe eyenza le nqanawa, isenzo sahlaziywa xa ababini baseBrithani bahamba ngomlilo baseJamani. Ngethuba elinye litshona, elinye lonakaliswe kakubi kodwa lingazange ligcinwe ngenye indlela yiHMS iWarspite eyayinezixhobo ezihamba phambili ezenza ukuba zijikeleze kwaye zenze umlilo wesiJamani.
Ukusondela kwiBritani, i-Hipper iphinde idibaniswe kunye nabadlali be-battlecruisers, kubandakanywa iinqanawa ezintsha zeHood. Ukuthatha umonakalo omkhulu, waphoqeleka ukuba ashiye i-SMS ye-SMS eLutzow , kodwa kungekhona ngaphambi kokuba iinqanawa zakhe zitshise i-HMS Invincible , ibulale iHood. Ngo-6: 30 ntambama isenzo esinqununu saqala ngo-Scheer wamangaliswa ukufumana iinqwelo zokulwa zeJellicoe eziwela i-T. Iinqanawa zakhe ezikhokelela phantsi komlilo ogqithisiweyo ukusuka kumda waseBrithani, iSerer yavelisa inhlekelele ngokuyalela umxhasi wongxamiseko obizwa ngokuba yiGefechtskehrtwendung (imfazwe malunga nokujika kwi-starboard) eyayijonga nganye iinqanawa ngokuguqula ii-180 degrees.
Ukwazi ukuba akakwazi ukuphumelela ukugxotha kunye nokukhanya okukhulu okusele kusinde, uSimer wabuyela eBrithani ngo-6: 55 PM.
Ngo-7: 15 PM, i-Jellicoe kwakhona yawela i-German T ngeenqwelo zakhe zokulwa ezihamba ngeSMS Konig , i-SMS Grosser Kurfürst , i-SMS Markgraf kunye ne-SMS ka-SMS ka-Scheer. Ngaphansi komlilo oqinileyo, u-Scheer waphoqeleka ukuba awise enye idabi malunga nokujika. Ukugubungela ukurhoxiswa kwakhe, walela umonakalo omkhulu wokuhlaselwa kumgca waseBrithani, kunye nokuthumela i-battlecruisers phambili. Ukuhlangana nomlilo onobundlobongela kwiJellicoe, i-battlecruisers yonakalisa umonakalo omkhulu njengoko iSierra yafaka isikrini somsi kwaye yabuya. Njengoko ama-battlecruisers aphelile, ababhubhisi baqalisa ukuhlaselwa kwe-torpedo. Ukujikela ekuhlaselweni, iinqwelo zokulwa zaseBrithani zazisindaza, nangona zibiza iJellicoe ixesha elibalulekileyo nemini.
Imfazwe yaseJutland - Isenzo sobusuku:
Njengoko kubumnyama, abadlali beBatty abaseleyo bachitshiyelwa amaJamani nge-8:20 PM kwaye bafumana amanqaku amaninzi kwiSMS yeSdlitz .
Ukwazi ukuphakama kwesiJamani ebusuku, uJellicoe wazama ukuphepha ukuhlaziya imfazwe kwada kwasa. Ukugqithisa ngezantsi, wayezimisele ukuvimbela uSyer ukuba ahambe ngendlela eya eJade. Ukulindela ukuhamba kukaJellicoe, iSeker yanciphisa kwaye yawela i-Grand Fleet evukile ebusuku. Ukulwa ngesikrini semikhumbi elula, iinqanawa ze-Scheer zenza uluhlu lweemfazwe zobusuku obushushu.
Kule mpi, iBrithani yalahlekelwa yi-cruiser HMS Black Prince kunye nabatshabalali abaninzi kwiintshaba zomlilo kunye neentlanzi. I-fleet ye-Scheer yabona ukulahlekelwa kwe-SMS yokuqala ye-Dreadnought Pommern , i-cruiser elula, kunye nabatshabalali abaninzi. Nangona iinqwelo zemfazwe zeSyer zazibonwa ngamaxesha ambalwa, uJellicoe akazange azaliswe kwaye iGrand Fleet yaqhubeka ihamba ngomkhumbi. Ngo-11: 15 PM, umlawuli waseBrithani wathola umyalezo ochanekileyo oqulethe indawo yaseJamani kunye nokuhamba, kodwa ngenxa yechungechunge lweengxelo zengqondo eziphosakeleyo ngaphambili kwimihla, yayinganakwa. Kwakungekho ngo-4: 15 ngomhla ka-Juni 1, ukuba uJellicoe waqatshelwa kwisikhundla sokunyaniseka saseJamani malunga nokuba wayekude kangakanani ukuba aphinde aphumelele imfazwe.
Imfazwe yaseJutland - Imva:
EJutland, iBrithani yalahlekelwa ngabahlaseli abangama-3, abahlaseli beentonga ezi-3, kunye nabatshabalali abayi-8, kunye nabangama-6094 ababuleweyo, ama-510 abalimele, kunye nama-177 athathwe. Ilahleko zaseJamani zinenani eli-1 eliyi-dreadnought, 1 battlecruiser, i-5 cruiseers, i-6 destroyers, kunye ne-1 yamanzi. Abadabukileyo babalwa njengama-2,551 babulawa kunye no-507 balimala. Ekuvukeni kwemfazwe, amabini omabini athetha ukunqoba. Ngelixa amaJamani aphumelela ekunciphiseni i-tonnage kunye nokulimala okuphezulu, imfazwe ngokwayo yabangela ukunqoba kweBritish.
Nangona uluntu luye lwafuna ukunqoba olufana noTrafalgar , iinzame zaseJamani eJutland zahluleka ukuphelisa i-blockade okanye ukunciphisa kakhulu inzuzo yamaxabiso e-Royal Navy kwiinqanawa ezinkulu. Kwakhona, isiphumo saholela kwiiLwandle eziPhezulu zeFleet ngokusesikweni esele kwipropati ngenxa yentsali elwa yimfazwe njengoko iKaiserliche Marine yajika ingqalelo kwiinkwenkwezi zamanzi.
Nangona bobabini uJellicoe noBetty begxeka ngenxa yokusebenza kwabo kwiJutland, imfazwe yabangela ukuba utshintsho oluninzi kwiRoyal Navy. Ukuqaphela ukuba ukulahleka kwiimfazwe zempi kwakukho ngenxa yecala lokunika iinkqubo, kwenziwe utshintsho ukuqinisekisa ukukhuselwa kwezinga eliphezulu. Kwakhona ukuphuculwa kwenzelwa ukusetyenziswa kwezibhamu, ukubonakalisa, kunye nemiyalelo emileyo ye-Fleet.
Imfazwe Yehlabathi yokuqala: iMfazwe yaseJutland
Iziphumo zeMfazwe Yehlabathi I
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseAmiens
Uhambo Ngendlela Yelanga: Ilanga lethu
Iimfazwe zeNkqaba zeNkcazelo yeeNkcazo: Umyalelo 66
Iimpawu ezivela kwi-Anchorman